YAAD-RIMEE GARBUMMAAFI GARBOOMFATAA- – Beekan Guluma Erena
YAAD-RIMEE GARBUMMAAFI GARBOOMFATAA-	Beekan Guluma Erena
Politics Category May 6, 2016May 6, 2016OROMO
YAAD-RIMEE GARBUMMAAFI GARBOOMFATAA-
Gabrummaa jechi jedhu ykn gabrummaan jiraachuudhaa wontoonni lama jiraachuun dirqama ta,a. Isaan lamaanis : 1.Gabra ykn gabroomaa 2.Gabroomfataa ykn gabroomsaadha. Gabri qaama ykn nama gabroome yoo ta’u, Gabroomfataan ammoo qaama nama gabroomfatee mirga namaa namarraa mulqe isa gubbaarra aaneedha. Gabroomfataan yeroo hedduu unmmata ykn dhuunfaa kamuu irra aanee gabroomfachuudhaaf wontoota garaagaraatti dhimma bahuu danda’a. wontoota gabroomsaan qaama biroo gabroomsuuf ittiin dhimma bahu keessaa kanneen akka faaydaa yerootiin sobuu,qaama gabroomfachuu barbaadu sana keessaa namoota muraasa maxxanfatee qabachuu, humna qawweedhaa fayyadamuudhaa faa akka fakkeenyaatti kaasuu ni dandeenya. Kanarratti ammoo qaamni gabroomfataan kun kaayyoon isaa akka galma geessuuf qaama gabroomfachuu barbaade sana keessaa namoonni dura dhaabbatan akka ummata isaanii biratti fudhatama hin arkanneef jecha maqaa balleessuufi boqannaa dhoorkee rakkisuun dirqama isatti ta’a . Haalli kun isaaf laafuu yoo didemmoo namoota gabrummaa kana ufiifi ummata isaaniirraallee hanbisuudhaaf falmatan kanniin lubbuudhaanuu dhabamsiisuun dirqama gabroomfataati. Gabrimmoo hedduu gabrummaa jala turee osomaa falmatuuyyuu yeroon yoo dheerachaa dhufu wontoota gargaraattu isa mudata. Wontoota mudatan keessaa muraasni:
1)Gabroomuu jibbuurraa kan ka’e gabroomfataa ta’uudhaaf hawwuu, 2)Turtii gabrummaarraa kan ka’e miidhaa gabrummaatiin wol baree falmachuutti laafuu, fi wontoota biroollee hedduu kaasuun ni danda’ama. Qaamni gabroomee gabroomfataa jala jiru tokko bilisoomee sirna gabroomfataadhaa cabsee bilisummaa nama hundaaf fiduudhaaf yaaduu qaba malee gabrummaa jalaa bahee gubbarra aanuudhaan gabroofachuu qaba jedhee yaaduun yaada hamaa gabrummaan turte nama keessatti uumtuudha. Gabri guyyaa isa gubbaarraa ta’ee gabroomfachuu qaba jedhee yaaduun mataasaa keessa seenterraa kaasee gabroomfataa guddicha mataasaarraa kaasuu dadhabullee namootuma isa jala jiran gabroomfachuu jalqaba. Hooggana dhaabaa yoo ta’e, miseensotaafi ummata jala jiru gabroomfata . Kuunis maatii fi hawaasa naannoo irratti olaantummaafi anumaatu beekaa eegala. Yeroo kana wol amanuufi jaalalli badaafi qaamonni biroos isarraa fottoqanii jiraachuuf mala baafachuu eegalu….. –
-Kutaan 2ffaan itti fufa.
KAMAAL ALOO JOHANNESBUR
← WAA TOKKO FILADHU
IMAANAAKEE-Yaadannoo Obboloota Cabaniif Qindaa’e!! →